တောင်မရောက် မြောက်မရောက် ( ၁ ) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Creative Writing » တောင်မရောက် မြောက်မရောက် ( ၁ )	10
တောင်မရောက် မြောက်မရောက် ( ၁ )
Posted by တောတွင်းပျော် on Jul 4, 2016 in Creative Writing | 10 comments
တောင်ရောက် မြောက်ရောက်ခရီးသွား ဓါတ်ပုံစီးရီးတင်နေတာကနေ ဘေးခဏထွက်ပြီး
တခြား အဆက်အစပ်မရှိပုံတွေ ကြားညှပ်တင်လိုက်ပါအုံးမယ်။
ဒါတွေကလည်း ဝါသနာအရ ရိုက်မိရိုက်ရာတွေပါပဲ။
တစ်ချို့ ပုံတွေက မကျွမ်းကျင်ပေမယ့်အလှရိုက်ထားတဲ့ ပုံတွေဖြစ်ပြီး
တစ်ချို့ ပုံတွေက ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုနဲ့ဆက်စပ်တဲ့မှတ်တမ်းပုံလေးတွေပါ။
ဒီပုံတွေကို ကျနော့်facebook မှာ တင်ခဲ့ ပြီးသားတွေပါ။
အမှတ်စဉ်တော့လိုလိုမယ်မယ်တပပ်ထားလိုက်အုံးမယ်။
တောင်မရောက် မြောက်မရောက်ပုံတွေ နောက်ထပ်ရိုက်နိုင်ခဲ့ ရင်ပေါ့ ။
မနှစ်က သံဖြူဇရပ်မြို့ နယ် ဘဲလမိုင်းရွာ ကရင်နှစ်သစ်ကူးညက ရိုက်ထားတာပါ။
အဟမ်း! ဒီပုံကို ဂဇက်ရွာသားကြီး ဆရာဂျစ်စူအတွက် ရည်စူးပါတယ်။
ဆရာဂျစ်စူရေ shake! ကရင်စောင်း
သထုံမြို့ နယ် ထောင်မှူးရွာ ထောင်မှူးဆရာတော့် မွေးနေ့ မှာ ဖျော်ဖြေနေတဲ့ကော့ ကရိတ်မြို့ နယ်ဖက်က ကရင်စောင်းပညာရှင်တစ်ဦးပါ။ ဒီစောင်းကို ကြောင်လျှာပင် လက်ပံသားနဲ့ပြုလုပ်တယ်လို့ 
သိရပြီး သီဆိုတီးခတ်နိုင်တဲ့ သူ အတော်ရှားပါးနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ တိမ်မြုပ်ပျောက်ကွယ်လုဖြစ်နေတဲ့ 
ထောင်မှူးဆရာတော် ထိန်းသိမ်းစောင့် ရှောက်ထားတဲ့ကျွဲဒုံး။ ဒီကျွဲဒုံးကို ကလေးငယ်တွေနဲ့ကပါတယ်။ ကရင်ရိုးရာဒုံးမှာလည်း နာမည်ပေးပြီး ခွဲထားတာတွေ့ ရတယ်။
အပျိုကြီးဒုံးယိမ်း အပျိုလေးဒုံးယိမ်း စသည်တို့ ပေါ့ ။ ဒုံးယိမ်းအကြောင်းတော့တောတွင်းပျော်လည်း
ကလေး လက်ဝှေ့ 
တောတွင်းပျော်တို့ ဖက်မှာ အလှူတွေရှိတဲ့ အခါ ရိုးရာလက်ဝှေ့ ပွဲတွေပါတတ်တယ်။ မိုးအကုန် ဆောင်းအကူး စပါးတွေရိတ်သိမ်းပြီးဆိုရင် ရွာစဉ်ဘုရားပွဲတွေရှိတတ်ပြီး လက်ဝှေ့ ပွဲတွေပါရင် ရွာက
လက်ဝှေ့ဝါသနာရှင်လူငယ်တွေ အုပ်စုလိုက်ရွာတွေ ပတ်ပြီး ထိုးတတ်ကြတယ်။ ခုပုံက
တောတွင်းပျော်တို့ ရွာက ဆင်နဲ့ရှင်လောင်းလှည့် နေတာပါ။ လူတိုင်းတော့ဆင်စီးပြီး မလှည့် နိုင်
ကြပါဘူး။ ငွေကြေးတတ်နိုင်သူတစ်ချို့ မှသာ ဆင်ငှားနိုင်ကြပါတယ်။
has written 42 post in this Website..
အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက် says: .Good photos, thanks Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 399
တောတွင်းပျော် says: လျှပ်တပြက် ပုံရိပ်တွေပါ ဦးကြီးမိုက်။
ပုံတွေကောင်းတယ်ဆိုလို့ကျေးဇူးပါခင်ဗျာ ..
Thint Aye Yeik says: .စောင်းတီးတာမှာ
.စောင်း အတီး ပြိုင်ချင်လပ်ထာ
အနော်သာ စောင်း တီးရရင် ဖွေးဖွေးကို ဘေး ထားပြီး တီးမှာ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 399
တောတွင်းပျော် says: ဗမာစောင်းနဲ့ကရင်စောင်းက မတူပါဘူး။
တကယ်လို့ပြိုင်ချင်ရင်
ကျနော်က ဖွေးဖွေးကိုတီးမယ် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1684
အောင် မိုးသူ says: ယူလည်း ရိုက်နိုင်စိန်နော်။
တောတွင်းပျော် says: ဒါတောင် နည်းနည်းပဲတင်ထားတာ။
မမချွိ says: သဘာဝကျကျပုံတွေ။
တောတွင်းပျော် says: သဘာဝကျမှာပေါ့အမ
ခိုးရိုက်ထားတာတွေလေ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2285
Ma Ei says: ကလေးလက်ဝှေ့ပွဲပြီးရင် အဲ့ဒီကလေးနှစ်ယောက် ဘယ်လောက်ထိခိုက်သွားကြမလဲ မခေါ်မပြောစိတ်ဆိုးရန်ဖြစ်များနေမလား….
ဆင်ပေါ်က ရှင်လောင်းကလေးတွေကြည့်ပြီး သူတို့လဲ စီးချင်မှာတို့ ဆိုပြီး တောင်တောင်အီအီတွေးမိတယ်
တောင်မရောက် မြောက်မရောက် ပုံတွေဆိုပြီးတင်တဲ့ တောတွင်းပျော်ရေ….
တောတွင်းပျော် says: ကျနော်တို့ ဖက်မှာတော့ဒီလိုပဲ ခဏခဏထိုးကြတာပဲ။
ထိုးပြီးတော့ လည်း ဘာမှမဖြစ်။
သူနာကိုယ်နာ မထိုးခဲ့ သလို အတူတူပြန်ကစားကြတာပဲ။
ကျနော်တို့ ရွာတွေမှာ ရွာသားတွေ ရန်ဖြစ်လို့ထိုးကြကြိတ်ကြဆိုတာ တခါမှမရှိဘူး
ရှိရင်လည်း တခြားအရပ်ကလာတဲ့လူတွေအချင်းချင်းပဲဖြစ်ကြတယ်။
မိန်းမတွေကအစ မကောင်းတဲ့ စကားတွေနဲ့အရပ်ကြားလို့ မတော်
ဆဲကြဆိုကြတော့တောဖက်ကလူတွေ ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာနေဖို့လက်မခံတော့ ဘူး